Shina ampahany manodina ny hetsiky ny herinaratra elektrika porofom-pitrandrahana modely LQ | Nortech
Inona ny maodely Part turn Electric actuator Explosion Proof LQ?
Voalohany indrindra, izy io dia karazana ampandehanana mandeha amin'ny herinaratra, izay afaka miodina miankavia na miankavanana amin'ny zoro 300 ° farafaharatsiny. , sns. dia ny taranaka vaovaon'ny orinasanay ary azo ampiasaina amin'ny familiana sy fifehezana ny valizy lolo, valve ball ary valves plug (valve part-turn miaraka amin'ny fihetsiketsehana 90 °).
Faharoa, natao manokana ho an'ny tontolo iainana mipoaka sy ho an'ny toerana mampidi-doza, they be mpampiasa any an-tsaha toy ny solika, simia, famokarana herinaratra, fitsaboana rano, fanaovana taratasy. sns, ary nyfiarovana IP dia IP67, ary ny kilasy porofo mipoaka dia d II CT6 (LQ1, LQ2) ary d II BT6 (LQ3, LQ4, LQ4JS)
Endri-javatra lehibe an'ny maodely Part turn Electric actuator Explosion Proof LQ modely
● Fonenana: fanariana Aluminium anodized mafy sy hery epoxy ivelany mifono amin'ny tontolo indostrialy.
● Fitaovana fampitaovana: milina kankana indroa miantoana C / W tabataba mainty lashjow farafahakeliny, tavy avo lenta.
● fanidiana tena: manome alalana kankana indroa hitazonana ny toeran'ny valizy tsy miova amin'ny tora-pasika avy amin'ny valizy.
● Motera: motera namboarina manokana sy fampidirana mba hiteraka tora-panombohana avo lenta sy fahombiazana avo lenta miaraka amin'ny mpiaro hafanana mba hisorohana ny fahasimbana amin'ny fanamainana be loatra.
● Mpijanona mekanika ivelany: manakana ny fizotry ny dia rehefa tsy mandeha ny famerana.
● Switch Torque: Arovy ny actuator amin'ny fahasimbana ateraky ny be loatra avy amin'ny valizy entina mandritra ny dia manontolo, 1 ho an'ny fisokafana / akaiky.
● Ferana famerana: Mifandray mivantana amin'ny vatan'ny mpamily hametrahana toerana marina amin'ny valizy, manome famantarana famantarana maina.
● Fantsona: lohataona misy karazana tosika lohataona ho an'ny fifandraisana tariby tery ao anaty fihoarana mafy.
● Heater amin'ny habakabaka: fanoherana ny kôtra.
● Fanonganana an-tanana: fividianana fiara mifamadika fiara / fiara mifamadika ary fidirana an-tànana ho an'ny fiasan'ny tanana vonjy maika. Ny herin'ny fiara dia mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny fanombohan'ny motera, raha tsy hoe mihidy ny sakana mba hisorohana izany.
● Handwheel: miasa mivantana ny bokotra .turn mivantana mivantana rehefa maty ny herinaratra.
● Fantaro ny fizotran'ny dingana, fiarovana ny tsy fahombiazan'ny dingana.
● DC24V Voltage Class ho an'ny fanaraha-maso lavitra.
● Fomba fampitaovana mora sy malefaka.
● Selector miaraka amina endrika tsy azo idirana hanatsarana ny famehezana ny actuator.
● Toe-javatra iasana asehon'ireo famantarana famantarana dimy maina hanaraha-maso ny rafitra DCS.
● Fanaraha-maso ny famindrana ny famantaran-tsolosaina ho an'ny kompana DCS.
● Voafidy mifidy arakaraka ny fepetra takiana mba hisorohana ny fiasan'ny tsy fahombiazana.
Famaritana ara-teknika an'ny maodelin'ny fizarana Electric actuator Explosion Proof LQ
Asehoy ny vokatra: maodely maodely mpihetsiketsika momba ny fipoahana porofon'ny LQ
Fampiharana vokatra: maodely iray amin'ny modely Electric actuator Explosion Proof LQ
Ampahany mihodina modely fanamafisam-peo porofon'ny fanamafisam-peo LQno ampiasaina hifehezana ny valves sy ny valves elektrika, indrindra amin'ny toerana mampidi-doza sy mpanelanelana mipoaka, azo apetraka amin'ny valve rotary, valves ball, valves lolo, dampers, valves plug, valves louver, sns valves sns., mampiasa herinaratra fa tsy ny herin'olombelona nentim-paharazana mba hifehezana ny fihodinan'ny valizy hifehezana ny rivotra, ny rano, ny etona, ny haino aman-jery manimba isan-karazany, ny fotaka, ny solika, ny metaly ranoka ary ny haino aman-jery radioaktifa, ho an'ireo toerana mampidi-doza ary mahafeno ny fenitra UL 1203. Ny actuators dia henjana sy azo antoka miaraka amin'ny fonosana vita amin'ny aluminium anodized vita amin'ny vovoka ampiasaina amin'ny solika, gazy, simika ary fampiharana famokarana herinaratra.
Teo aloha: Ampahany mihodina herinaratra Actuator
Manaraka: Multi-turn Electric Actuator
Actuator ho an'ny valve
Mpiorina herinaratra ATEX
mpampita herinaratra ho an'ny valizy baolina
mpampita herinaratra ho an'ny valizy lolo
actuator elektrika ho an'ny valizy plug
Mihodina ny ampahany amin'ny mpikatroka elektrika
Mpikirakira herinaratra ho an'ny valizy baolina
actuator herinaratra porofo mipoaka
anjara mihodina herinaratra